एकाबिहान कोरोनालाई लिएर WHO ले गर्यो यस्तो डरलाग्दो घोषणा,एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने!:: Naya Nepal
एकाबिहान कोरोनालाई लिएर WHO ले गर्यो यस्तो डरलाग्दो घोषणा,एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने!
एकाबिहान कोरोनालाई लिएर WHO ले गर्यो यस्तो ड रलाग्दो घोषणा, एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने!काठमाडौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले फेरी कोरोनाको खोपले काम गर्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको प्रतिकृया दिएको छ । चीनवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी भएको छ । कोरोना विरुद्ध खोप बनाउन अहिले विश्वभरकै वैज्ञानिक लागेका छन् । रुसले कोरोनाको खोप निर्माण गरेको दावी गर्दै विक्रि समेत सुरु गरेको छ
कोरोनाको खोपको सकारात्मक परिणाम आएको समाचार आइरहेकी बेलामा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस अहिले विकास भइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपले काम गर्ने कुनै ग्यारेन्टि नभएको बताएका छन् । मंगलबार डा टेड्रोसले विकास भइरहेका खोपले काम गर्नेमा अहिले भन्न नसकिने बताएका हुन्।
भर्चुअल प्रेस ब्रिफिङका क्रममा उनले कोरोना खोप सफल हुने कुनै ग्यारेन्टि नभएको प्रतिकृया दिएका हुन् । यद्यपि उनले खोप जति बढी स्वयंसेवकहरुमा टेष्ट गरिन्छ त्यति नै राम्रो र प्रभावकारी नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिने बताए । उनले भने, ’कोभिड–१९ विरुद्ध करिब २०० खोप हाल क्लिनिकल र प्रिक्लिनिकलको परिक्षण भइरहेका छन् । इतिहासमा गरिएका खोप विकासको कामले हामीलाई विकासका क्रममा रहेका खोपहरु केही सफल पनि हुन सक्छन् भने केहि असफल पनि हुनेछन् ।
’डब्लुएचओले विश्वव्यापी खोप गठबन्धन समूह गावी र सीईपीआईको समन्वयमा भविष्यमा कसरी अन्य देशहरुमा खोपको समानरुपमा वितरण गर्नेबारे सक्षम संयन्त्र बनाएको छ। स्वास्थ्य संगठन प्रमुखले कोभाक्स सुविधा एक संयन्त्र हो, जुन विश्वव्यापी रूपमा समन्वयित भूमिका खेल्न प्रभावी हुने बताए । साथै सबै मुलुकहरुलाई आग्रह गर्दै उनले कोरोना भाइरसको उपचार खोज्न सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक सोच विकास गर्न नहुने बताए ।
कोभाक्स सुविधाले महामारी नियन्त्रण गर्न, जीवन बचाउन र आर्थिक सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँद छ। डब्लुएचओका प्रमुखले कोरोना भाइरस खोपको खोजीमा सबै देशहरूलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले खोप विकास गर्न मिलेर काम गर्नु सबै देशको हितमा रहेको बताएका छन् ।